Ny tobin'ny fahitalavitra Hearst dia mampiasa tamba-jotra TVU ho an'ny fampielezana lavitra isan'andro | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Ny tobin'ny fahitalavitra Hearst dia mampiasa tamba-jotra TVU ho an'ny fampielezana lavitra isan'andro
NBC Ny fahitalavitra miasa ao WGAL ao Lancaster, PA dia mandefa ny fandaharana amin'ny toetrandro isan'andro ho an'ny mpijery avy ao an-tranon'ny lehiben'ny mpamantatra toetrandro, Joe Calhoun, miaraka amin'ny fanampian'ny TVU Networks, mpitarika ny tsena sy ny teknolojia amin'ny vahaolana amin'ny horonantsary mivantana mifototra amin'ny cloud sy IP. Miaraka amin'ny COVID-19 mametra ny fitaterana ao amin'ny studio, nitodika tany amin'ny TVU Grid ilay vahaolana, vahaolana iraisan'ny mpiorina amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny IP izay mampiasa Internet commodity, mba hanome haino aman-jery sy fahitalavitra lavitra miaraka amin'ny fahaizan'ny studio sy ny fahaizany.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny lozisialy biolo-lalana an'ny TVU Grid, nahafahan'ny WGAL nanolotra fahaiza-manao studio ho an'i Calhoun hanaterana ny vinavinan'ny toetrandro toy ny hoe velona ao amin'ny studio izy. Ny gara dia nanangana efijery maitso misy sary ary nanosika azy tsy hifehezana ny master ho any an-tranon'i Calhoun ho fampisehoana raha manome atiny video avy any an-tranony niverina tany amin'ny studio izy. Tanteraka izany rehetra izany HD horonan-tsary sy latency ambany mampiasa TVU Grid.
"Ny areti-mandringana dia nanery anay hanomboka hieritreritra ivelan'ny boaty raha ny amin'ny asa lavitra," hoy i Kevin Kalia, talen'ny injeniera ao amin'ny WGAL. “Ny tsiambaratelo dia ny fandefasana fahana kalitaon'ny fampielezam-bolan'ny toetr'andro an'i Joe ho azy, nametaka ny fitifirana azy tamin'ny famadihan-telefaona teo amin'ny toerany ary avy eo nandefa feed program ho an'ny gara - miaraka amin'ny TVU daholo izany. Nilamina ny fizotrany rehetra. ”
TVU Grid dia manome fanovana, fitetezana ary fizarana horonantsary mivantana amin'ny IP. TVU Grid dia ampiasain'ny masoivohom-baovao sy ny fikambanan'ny haino aman-jery manerantany hizarana sy hanakaloana ireo horonan-tsary kalitaon'ny fampielezam-peo mivantana azo antoka fa tsy misy latency. Mampiasa Internet ny entam-barotra hanaterana horonantsary avo lenta sy ambany latency avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny maro hafa, manome safidy mahomby ho an'ny fibre nentin-drazana sy zanabolana. TVU GridLink dia manome topy maso an-tsary avy amina masoivohom-baovao an-jatony ary nanisy metadata manankarena hanampy amin'ny fikarohana votoaty mivantana.
Previous: Ny vondrona fahitalavitra finday dia manampy telestrator FOR-A ho an'ny famokarana fanatanjahantena mivantana
Next: Solène Zavagno notendrena ho mpitantana ankapobeny ny Gravity Media any Frantsa